Owen Oo Qirtey Inuu Labo Jeer Tartanka Koobka Adduunka Uu Is Tuuray Kadibna Rigoore Loo Dhigey - jornalizem
Owen Oo Qirtey Inuu Labo Jeer Tartanka Koobka Adduunka Uu Is Tuuray Kadibna Rigoore Loo Dhigey
Ciyaaryahanka England Michael Owen ayaa sheegay in labo jeer oo uu rigoore u keenay xulkiisa oo ka soo horjeeday Argentina ay ahaayeen kuwo uu dhulka isku tuuray kadibna rigoore loo dhigey.
Weeraryahanka Stoke oo hadda 32jir ahayaa sheegay in labadaa kulan uu mid ka dhacay Faransiiska 1998 halka kulanka kalana uu ahaa 2002 ciyaaryihii koobka adduunka ee lagu qabtay Japan iyo Koofur Kuuriya.
Owen ayaa hase ahaatee sheegay in daafacyadii markaa ku galay qaladka ay taabteen lugtiisa balse uu awoodi karay in uu sii ciyaaro balse ka jecleystey in uu istuuro.
Owen ayaa ka horqirtey warkan kulan ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha kubbada cagta kaasoo uu shir gudoominayay Pierluigi Collina oo madax u ah garsoorayaasha UEFA balse waxa uu ahaa Collina garsoorihii u dhigey rigoorada Owen 2002.
Michael Owen waxa uu sheegay in weeraryahanada ay boqolkiiba 75 marka lagu dhex jalaafo gudaha diilinta ganaaxa ay sii wadan karaan ciyaartooda balse ay ka doorbidaan in ay dhulka isku tuuraan si ay rigoore u helaan.
Roberto Ayala ayaa ahaa daaficii rigoorada u keenay xulka Argentina markii uu is tuuray Owen sanadkii 1998 garoonka St Etienne. Alan Shearer ayaana u dhaliyey xulka England goolka balse rigoorayaal ayaa loogaga badiyey England.
Garsoore Collina ayaa rigoore ka dhigey Mauricio Pochettino markii uu u qaatay in uu qalad ku galay Owen sanadkii 2002,David Beckham ayaana u dhaliyey rigoorada taaso 1-0 uu ku badiyey xulka England.
Toddobaadkan ayaa ciyaaraha ka dhaca Yurub waxaa hadal heynta ugu weyn ay ahayd weeraryahanda is tuurtuura taasoo si weyn loogu eedeeyey weeraryahanka kooxda Liverpool ee Suarez.